ဥရောပသမဂ္ဂသံအမတ်ကြီး MYPOL လူစုလူဝေး စနစ်တကျစီမံထိန်းသိမ်းခြင်း သင်တန်းသို့ သွားရောက်လေ့လာကြည့်ရှု - MyPol
ဥရောပသမဂ္ဂသံအမတ်ကြီး MYPOL လူစုလူဝေး စနစ်တကျစီမံထိန်းသိမ်းခြင်း သင်တန်းသို့ သွားရောက်လေ့လာကြည့်ရှု
14 ဇှနျ, 2018 in Crowd Management
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဥရောပသမဂ္ဂ သံအမတ်ကြီး Mr. Kristian Schmidt သည် MYPOL ၏ လူစုလူဝေးအား စနစ်တကျ စီမံထိန်းသိမ်းခြင်း သင်တန်းအား ဇွန်လ ၈ရက်၊ သောကြာနေ့တွင် သွားရောက်လေ့လာ ကြည့်ရှုခဲ့ပါသည်။
MYPOL မှ စီမံကိန်းအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Ricardo Carrasco၊ ဒုတိယစီမံကိန်းအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Azucena Martinez နှင့် လူစုလူဝေး စနစ်တကျ စီမံထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ အဓိကကျွမ်းကျင်ပညာရှင် Julio Bueno တို့မှ သံအမတ်ကြီး Mr. Kristian Schmidt အား လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် သံအမတ်ကြီးသည် သင်တန်းခန်းမများနှင့် သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများကို ကြည့်ရှုခဲ့ပြီး MYPOL မှ နိုင်ငံခြားသားနည်းပြများနှင့်လည်း တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ သံအမတ်ကြီးသည် လူစုလူဝေးအား စနစ်တကျစီမံထိန်းသိမ်းခြင်း လေ့ကျင့်ခန်းအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် စကားပြောဆိုခဲ့ပါသည်။
လေ့လာကြည့်ရှုနေစဉ်တစ်လျှောက်လုံးတွင် သံအမတ်ကြီး Mr. Kristian Schmidt သည် ဥရောပသမဂ္ဂ၏ ကတိကဝတ်ဖြစ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အား နိုင်ငံတကာမှ အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များကို လိုက်နာစောင့်ထိန်းသော၊ လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစားလိုက်နာသော၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ မတူညီသော အဖွဲ့အစည်းအမျိုးမျိုးမှ ယုံကြည်အားကိုးရသော ရဲတပ်ဖွဲ့ဖြစ်လာစေရန် ကူညီပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းကို ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
သံအမတ်ကြီးလာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့သည့် နံနက်ပိုင်းတွင် ရဲသင်တန်းသားများသည် သင်တန်း၏ မတူညီသောကဏ္ဍအသီးသီး ပါဝင်သည့် လေ့ကျင့်ခန်းတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။ လေ့ကျင့်ခန်းပြီး ဆုံးသွားသည့်အချိန်တွင် သံအမတ်ကြီးသည် သင်တန်းကာလတစ်လျှောက် ရရှိခဲ့သည့် အတွေ့အကြုံများ၊ သင်တန်းကိုတက်ရောက်ရန် မည်ကဲ့သို့ရွေးချယ်ခံခဲ့ရကြောင်း၊ မိမိ၏မိသားစုနှင့်တစ်လကြာခွဲခွာ နေထိုင်ရ သည့်အတွက်ခက်ခဲမှုရှိ၊မရှိနှင့် သင်တန်း ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန်အတွက် အကြံပြုချက်များကို သင်တန်းသားများနှင့် ပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်။ ဆက်လက်၍ MYPOLမှ ယခင်က သင်ကြားပေးထားသော သင်တန်းတက်ရောက်ပြီးကာ လက်ရှိသင်တန်းတွင် ကူညီသင်ကြားပေးနေသည့် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှ နည်းပြများနှင့်လည်း စကားပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်။
MYPOL၏ လေးပတ်ကြာမြင့်သည့် လူစုလူဝေးစနစ်တကျစီမံထိန်းသိမ်းခြင်းသင်တန်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံသားများ၏ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် အခွင့်အရေးများကို လေးစားတန်ဖိုးထား၍ လူစုလူဝေးများအား ထိန်းသိမ်းခြင်း နှင့်ပတ်သက်သည့် ဘာသာရပ်များစွာ ပါဝင်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှ သင်တန်းသားများကို အခင်းဖြစ်ရပ်တွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူအား ကယ်ထုတ်ပြုစုခြင်း၊ ကိုယ်ခံပညာ နှင့်တပ်ဖွဲ့ငယ်များနှင့် အထူးလေ့ကျင့်ထားသည့် တပ်ဖွဲ့များအတွက် လူစုလူဝေးထိန်းသိမ်းနည်းများအား သင်ကြားပြသပေးခဲ့ပါသည်။ ဤသင်တန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှ လူစုလူဝေးများကို ထိရောက်စွာနှင့် လေးစားစွာ စနစ်တကျ စီမံထိန်းသိမ်းနိုင်သည့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို တည်ဆောက်ပေးရန် ရည်ရွယ်ပြီး ဤသင်တန်းသည် MYPOL ၏ ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ကာ ကူညီဖေးမခြင်းကို အလေးပေးသော၊ တရားမျှတမှု ရှိပြီး ရဲလုပ်ငန်းစနစ်အား ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာအသုံးချနိုင်သော မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဖြစ်လာစေလိုသော ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသ ဖြစ်ပါသည်။
21 ဇှနျ, 2018 MYPOL မှ နည်းပြများ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်းအတွင်းရှိမူကြိုကျောင်းသို့ သွားရောက်လည်ပတ်	Read More
2 နိုဝငျဘာ, 2017 လူစုလူဝေးအား စနစ်တကျကုိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းမှု မွန်းမံနှင့် နည်းပြသင်တန်း	Read More
30 ဇနျနဝါရီ, 2018 MYPOL မှ စီစဉ်သည့် လူစုလူဝေး စနစ်တကျ စီမံထိန်းသိမ်းခြင်း သင်တန်း Read More
MYPOL works to assist the Myanmar Police Force in becomingamodern police agency centred on international best practices and respect for human rights.
All actions are aimed at reaching an effective, efficient and accountable police service that is trusted by Myanmar’s many different communities.
MYPOL အနေဖြင့် ဒုတိယကြိမ်မြောက် ယာဉ်လမ်းကြောင်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းပြုလုပ်5ဧပွီ, 2019
နေပြည်တော်တွင် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ5ဧပွီ, 2019
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ကျဆုံးသွားသော ရဲအရာရှိ ကိုးဦးတို့အတွက် MYPOL မှ ဝမ်းနည်းကြောင်းသဝဏ်လွှာပေးပို့ခြင်း 14 မတျ, 2019
ဥရောပသမဂ္ဂသံအမတ်ကြီး MYPOL ပြည်သူဗဟိုပြုရဲလုပ်ငန်းသင်တန်းသို့ သွားရောက်လေ့လာကြည့်ရှု 19 အောကျတိုဘာ, 2018
MYPOL မှ နည်းပြများ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်းအတွင်းရှိမူကြိုကျောင်းသို့ သွားရောက်လည်ပတ် 21 ဇှနျ, 2018
MYPOL ON FACEBOOK
© 2019. MYPOL. All rights reserved.